ISDHAAFSI: United Iyo Chelsea Oo Cayaaryahanno Usoo Bandhigay Spurs Si Ay U Helaan Kane – Garsoore Sports
ISDHAAFSI: United Iyo…
Manchester United, Manchester City iyo Chelsea ayaa dhammaantood ‘suuqa ugu jira’ weeraryahanka Tottenham Harry Kane, kaasoo muujiyay rabitaankiisa inuu ka tago kooxda ka dhisan waqooyiga London xagaagan.
Kane ayaa ku jahwareeray Spurs xilli ciyaareedkan, iyadoo kooxdu ay ku adkaatay inay koobab ku guulleeystaan markale taasoo sabab u noqotay in uu dhammaado dulqaadkii Harry Kane islamarkaana uu raadsaso meel ay ku fuli karto himilooyinka shaqsiga ah.
Rikoorkiisa 162 gool 230 kulan oo uu saftay kiisii ugu horreeyay ee Premier League-ga billowgii xilli ciyaareedkii 2014/15 ayaa ka sheekeeynaya waxqabad u gaar ah wuxuuna kusoo laabtay qaabkiisii ugu fiicnaa sannadkan 2020/21 kaddib markii uu soo wajahay labo sano oo adag oo ay dhaawacyo kasoo gaareen canqowga gadaashiisa.
Iyadoo United, City iyo Chelsea dhammaantood raadinayaan weeraryahan cusub xagaagan, waqtiga ayaa noqon kara mid qumman, in kasta oo caqabadda ugu weyni ay tahay in Spurs loo soo bandhigo dalab ku filan inay ka laabtaan fikrada diidmada iibka xiddigan.
Tan iyo markii ay iska iibiyeen Dimitar Berbatov oo ku biiray United 2008dii, Spurs waxay caado ka dhigatay inay xiddigahood ugu fiican ka iibiso kooxaha dibbada marka ay soo dalbadaan, halkii ay ka iibin lahayd kooxaha ay xafiiltamaan ee Premier League-ga, waxaana cayaaryahanadii ay Spurs iska iibisay ka mid ah Luka Modric iyo Gareth Bale oo Real Madrid u wareegay sannadihii 2012 iyo 2013(sidey magacyada u kala horreeyaan).
Si kastaba ha noqotee, Kane ayaa si weyn loogu maleynayaa inuu doorbidayo inuu sii joogo Premier League taas ayaana ka dhigan in Tottenham ay tahay inau ka iibiso mid kamid ah kooxaha ay xafiiltamaan waana inay u fiirsadaan dalabka macquulka ah iyo kooxda ay tahay in laga iibiyo.
Marka laga hadlayo City, The Athletic ayaa qortay in falanqaynta kooxda ee Kane ay muujisay in aagagga garoonka ee uu goolashiisa ka dhaliyo aysan la jaan qaadi karin halka kooxda haatan jirta ay fursadaha ugu badan ka abuurto. Si kastaba ha noqotee, albaabku waa uu u furan yahay la qabsiga, waxaana la sheegay in tababare Pep Guardiola uu is waafajin karo qodobadan.
Dhanka United, Wararka ayaa sheegaya in uu Kane diiradda u saaranyahay taniyo bishii Janaayo ee sannadkan iyadoo ay sii kordheyso wacyiga uu ka qabo inuu ka tago Tottenham.
Waxaa la sheegay in kooxda ka dhisan Old Trafford ay tahay mid kamid ah labada dhinac ee sameeyay ‘dalabaad toos ah’ oo ku saabsan kabtanka xulka Ingiriiska, jawaabta Spursna waxay noqotay mid aanay ku qancin.
Kooxda kale ee dalabka tooska ah ka gudbisay Kane waa kooxda Chelsea waxaana labadan kooxba ay sameeynayaan dhaqdhaqaaqyo joogto ah si ay ugu guulleeystaan tartanka saxiixiisa.
90min ayaa markii ugu horreysay ka warbixisay baahida ay Blues u qabti weeraryahan cusub bishii Diseembar, markii hore waxay xiiso u qabtay Erling Haaland oo Borussia Dortmund u safta. Blues ayaa sidoo kale tan iyo markaas lala xiriirinayay Sergio Aguero, kaasoo haatan u muuqda inuu si bilaash ah ugu biiri doono Barcelona.
Manchester United iyo Chelsea ayaa labadaba soo bandhigay heshiisyo cayaaryahanno la isku dhaafsanayo.
Waxaa jirta warar xan ah oo la hadal hayo kuwaasii oo sheegaya in dalab ah 120 milyan oo yuuro ay ku filnaan karto kooxahan inay durbaba helaan adeega Harry Kane laakiin United ayaan laga fileyn inay lacagtaas ku qarashgareyso hal ciyaaryahan.
Si kastaba ha ahaatee, United ayaa ku fikiraysa haatan inay cayaaryahanno dhaafsadaan Kane iyadoo Anthony Martial mar hore lala xiriiriyay inuu u dhaqaaqo dhanka Spurs, halka Jesse Lingard uu sidoo kale noqon karo dookh furan, inkasta oo West Ham ay ka go’an tahay inay ku hesho heshiis joogto ah.
Dhanka Chelsea-na, ESPN ayaa qortay inay diyaar u yihiin inay Tottenham usoo bandhigaan lacag kaash ah iyo laacib ka tirsan kooxda, iyadoo weeraryahan Tammy Abraham iyo goolhaye Kepa Arrizabalaga ay ka mid yihiin kuwa ay diyaarka u yihiin inay u huraan saxiixa Kane.
Cayaaryahanka garabka ka cayaara ee Callum Hudson-Odoi ayaa ah cayaaryahan kale oo lagu sheegay miisaan macquul ah, laakiin cabsida Chelsea ayaa ah in Spurs laga yaabo inay diido inay la ganacsato iyaga, iyadoo sidoo kale laga yaabo inay ganacsi la sameyso kooxdan marka ay dhageystaan dalabyada kooxaha ka dhisan magaalada Manchester.